ဂေဇက် ဓါတ်ပုံပြပွဲ မေလ (ဈေးသည်) သုံးသပ်ချက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဂေဇက် ဓါတ်ပုံပြပွဲ မေလ (ဈေးသည်) သုံးသပ်ချက်
ဂေဇက် ဓါတ်ပုံပြပွဲ မေလ (ဈေးသည်) သုံးသပ်ချက်
Posted by ムラカミ on Jun 4, 2012 in Copy/Paste | 36 comments
2012 May man gazette photoshow
သည် တပါတ် အိမ်ပြန်မအိပ်ဖြစ်လို့ ဗျာ …
အဲ့ဒါ သုံးသပ်ချက် ရေးတာ …နည်းနည်း နောက်ကျသွားပါတယ်..
ဟိုဘက် ပို့စ် ထဲက ကောမန့်တွေနဲ့ ဘယ်ပုံကို ဘယ်သူ
ဘယ်လို ရိုက်ထားသလဲ ဆိုတာလေး ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ…။
အန်တီ ပဒုံမာ ရဲ့ လက်ရာဖြစ်ပါတယ်။
Disc: ကိုလုလင် ဆီက မေးပါလို့ ဆိုလာပါတယ်။
လေးပေါက် လက်ရာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Disc: 1/125s ISO 100
ကို နိုဇိုမိ ရဲ့ ပုံဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ မှော်ဆြာ့ လက်ရာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလှဆုံးပုံ ဖြစ် တယ်လို့ ပြောပါရစေ …
Disc: F/5.6/ ISO320, 1/30s
ဒေါ်ခိုင်ခိုင့် လက်ရာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ဂရက် ကျူလေး ရှင်းပါ ..။
Disc: f/27, ISO-80, 1/160s
အန်တီ အေးကေကေရဲ့ လက်ရာပါ.
အလွန် ရက်စက်တဲ့ ညလေး ရဲ့ လက်ရာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရက်စက်တယ် ဆိုတာ ဒီလိုပါ ။ဘယ်လိုနေရာမှာ နေတယ်တော့မသိ
ကျနော့်ကို ၃၀မဂ္ဂါဘိုက် ကြီးများတောင် ကြီးတဲ့ ပုံဧရာမ ကြီး ပို့လာလို့ပါ။
Disc: f/8, ISO 320, 1/160s
ဆြာ လုလင်ရဲ့ လက်ရာဖြစ်ပါတယ်။ Abstract လို့ ဆိုလာပါတယ်။
Disc: ကိုယ့်ဆြာ ရေ …ပြန်ပေးပါဦး … အဲ့တုန်းက မေးလ်မှာမပေးဘဲ ဖေ့စဘုတ်မှာ
ပြောလိုက်တယ်ထင့် ..ခု မေးလ်မှာ ပြန်ကြည့်တော့ မတွေ့တော့လို့
အန်တီပဒုံမာ့ တူမလေး လက်ရာ လို့ ယူဆရပါတယ်။
(နာမည်မသိပါ.. ဂယ် မသိတာပါ)
Disc: လက်ခံ မမရှိပါ။
မွန်ကစ် ရဲ့ လက်ရာ ဖြစ်ပါတယ်။
Disc: f/3.4 ISO 160 1/200s
ကိုကျော်မွန်ခန့် ရဲ့ လက်ရာ ဖြစ်ပါတယ်။
Disc: f/6.3 ISO 800, 1/125s
ကိုရွှေမင်းသား ထင်ပါတယ်။ Johny Walker ဆိုတဲ့ အကောင့်နဲ့ ပို့လာတာပါ။
Disc: f/4.5 ISO250, 1/250s
Disc: f/16, ISO 400, focal length 38mm 1/125s
အင်ဖော်မေးရှင်း အပြည့်စုံဆုံး ကတော့ သဂျီး ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံကောင်းတာမကောင်းတာထား အင်ဖော်မေးရှင်း အတွက်တော့
ဒါကတော့ စိုလား ကိုကို အကောင့် ကတဆင့် မအားတဲ့ကြားက ပေးပို့ ပေးလိုက်တဲ့
Disc: လက်ခံရရှိခြင်း မရှိပါ။
ဒါကတော့ ဆြာကိုစိန်သော့ လက်ရာပါ ..
Disc: f13, ISO 1600, 1/2500s
မ မနောဖြူလေး ရဲ့ လက်ရာ ဖြစ်ပါတယ်။
Disc: f/3.5 ကျန် ၂ခု မပါလာပါ။
စာဖတ်သူ တယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ ဇာနည်သောင်း ရဲ့ လက်ရာဖြစ်ပါတယ်။
Disc: f/6.3, ISO 200, 1/80s
ဒါကတော့ စာဖတ်သူတယောက် ဖြစ်တဲ့ မန္တလေး က ကိုဇော်မင်းလတ် ပါတဲ့
Disc:f5.9, ISO 100, 1/1000s
စာဖတ်သူတယောက် ဖြစ်တဲ့ ကိုတင်ကိုကို ရဲ့ လက်ရာပါ..
Disc: f/6.3, ISO 200, 1/160s
ဒါကတော့ သတ်ပုံဂိုဏ်းချုပ် မမ ရဲ့ လက်ရာ ဖြစ်ပါတယ်…
ကို အန်စာတုံး ရဲ့ လက်ရာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Disc: f/5.8 ISO 200, 1/350s
မဝေေ၀ ရဲ့ လက်ရာဖြစ်ပါတယ်။
Disc: f/3.5 ကျန်၂ခု ပါမလာပါ။
ကျနော် မေ့ကျန်ခဲ့လို့ နောက်မှ ထပ်ဖြည့်လိုက်ရတဲ့ပုံပါ။
ချစ်ရင်ထူး-၂ ရဲ့လက်ရာ ဖြစ်ပါတယ်။
f/4 ISO400, 1/60s
ခြုံပြောရရင် aperture, ISO, shutter speed စတာတွေကို
မသိသေးတဲ့သူတွေ ထည့်မပေးသူတွေ ပါနေပါသေးတယ်။
မသိသေးတဲ့လူတွေကတော့ နီးစပ်ရာ မေးမြန်းကြည့်ပါ။ ကျနော်တို့
ပိုစ့် အဟောင်းတွေမှာလည်း ရှာဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ထည့်မပေးသူတွေကတော့ နောက်တခါ ဆက်ဆက် ပေးစေချင်ပါကြောင်းနဲ့..။
(စာနဲ့လည်း တောင်းမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း)
နောက်တခုကတော့ ဖိုင်ဆိုက်ဇ် တွေကိစ္စပါ….။
ကျနော်က ပြဿနာ မရှိပေမယ့် 5MB လောက် ဖိုင်ကြီးတွေကိုချိတ်ပို့နေတာ
ဒီ ကော်နက်ရှင် နဲ့ ဘယ်လောက် အံကြိတ်ပြီး ပို့ရတယ် ဆိုတာ
နောက်ဆုံး ကျနော့်ဆီရောက်လို့ ဒေါင်းပြီး ပြန်တင်ရင်လည်း 800x600px
ပြန်ချုံ့ မှာ မို့ ..ကနဦးကတည်းက ဆိုက်ဇ် ချုံ့ပြီး ပို့တာ ..ပို့လို့လည်း လွယ်
ကျနော်လည်း ဒေါင်းရတာ မြန် (ပြန်ချုံ့စရာမလို) အားလုံး အဆင်ပြေစေပါကြောင်း။
ဖိုတို အက်ဒင်းတင်း ဆော့ဖ်ဝဲ တခုခု အလွယ်သုံး ကို
တယောက်ယောက်ကသာ ရေးတင် ပေးမယ်ဆိုရင် အားလုံးက အလွန်
ကျေးဇူးတင်မှာ အသုံးတဲ့မှာ ဖြစ်ကြောင်းလည်း ..တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်…
နောက်ပွဲတွေ ပေးပို့တဲ့အခါ ..မိမိ ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဖြစ်တယ် ဆိုတာလေးကိုလည်း
ပြောပြစေချင်ပါကြောင်း …။ ရွာထဲက နာမည်နဲ့ မေးလ်အကောင့် နာမည် တွဲမသိ
ဇွန်လ အတွက် ခေါင်းစဉ်ကတော့ “ချစ်စရာ့ အရွယ်” ဖြစ်ပါတယ်လို့။
မိုက်တယ်နော် … မန်ဘာတွေတင်မကပဲ … စာဖတ်သူတွေပါ … ၀င်ပြိုင်ကြတာ တကယ်အားရဖို့ကောင်းတယ် … ။ ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးပုံက နံပါတ်(၂၀)ပါပဲ … ။ကျွန်မက ဓါတ်ပုံပညာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ .. ဘာဗဟုသုတမှမရှိလို့ မပြောတတ်ပေမယ့် …. အဲ့ဒီပုံလေးကြည့်ပြီး ဟတ်ထိသွားတယ် … ။ …
အန်တီမမရေ .. အသက်ဝင်တဲ့ … ဓါတ်ပုံလေးရိုက်ခဲ့တဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ .. အကြံဥာဏ်ကို ချီးကျူးမိပါတယ် …
ရွာရဲ့ ပထမဦးဆုံး ဓာတ်ပုံပြပွဲ အောင်မြင်သွားလို့ ..
ပထမဦးဆုံး စိတ်ကူးရခဲ့တဲ့ ချစ်ရင်ထူး
တာဝန်ယူပြီး ဦးဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ နှူးဘာဂိုဏ်းချုပ်ကြီး မောင်ဂီ
ဆုလက်ဆောင်တွေ ချီးမြှင့်ပေးတဲ့ သဂျီး၊ မောင်ဂီ နဲ့ ချစ်ရင်ထူး တို့ကို ကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
ကိုယ့်အတွက်ကတော့ ဆုမရပေမယ့် အထူးအင်တိုက်အားတိုက် အားပေးတဲ့ အီတုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံပြပွဲမှာကတည်းက အီတုံး မန့်တာကိုဖတ်ပြီး ကျိတ်ပြီး ၀မ်းသာနေတာ။
ပြောပြချင်ပေမယ့် ပြောပြလို့ကလည်း မရ။
ဆုမရပေမယ့် ဆရာ့ဆရာကြီးတွေ ကြားထဲမှာ ဒီလောက်လေး နေရာရတာနဲ့တင် အတော်ပျော်ပြီး ပိုးဝင်သွားလို့ နောက်လအတွက် တွေ့ရာနေရာမှာ ကုန်ကြမ်းရှာနေပါကြောင်းးးးးးးးး
ကိုယ်တိုင်တော့ လုင်ရဲ့ နံပါတ် ၈ ကို အလင်းအမှောင်ရော၊ အယူအဆကိုပါ ကြိုက်လို့ ဗုတ်ခဲ့ပါကြောင်း။
ဒီလအတွက် နောက်ဆုံးပို့ရမယ့် နေ့ရက် အချိန်ကို သိချင်ပါတယ်။
23 ကို vote ခဲ့တာ
အကြော်သည် ဒေါ်ဂျီးမိုး ပုံ မို့လားဟင်င်င်
နောက်ကျတော့ တစ်ခြားပုံတွေထက် အားပေးတဲ့သူနည်းမယ်ထင်တာရယ်
ပုံထဲကအဖွားကိုကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာရယ်ကြောင့်ပါ ..
ဓာတ်ပုံပညာထက် ခံစားမှုနောက်လိုက် လိုက်တာ
ဲJune လ အတွက် ပို့လို့ ရပြီလား ဗျို့….
သောကြာနေ့ကတည်းက ၁ယောက်တောင် ပို့ထားပါပြီ
ISO နှိမ့်နိုင်သလောက် နှိမ့် ရိုက်ပါ… (အစက်အပြောက် ဗြုတ်တွေ မပါချင်ရင်)
ညဘက်တွေ ဆိုရင်တော့ ISO မြှင့်နိုင်ပါတယ်။
Aperture ကတော့ တပုံလုံး ရှေ့လည်နောက် ပြေပြစ်စွာ focus မိချင်ရင်
ဂဏန်း အကြီး (f/8) နဲ့ အထက် သုံးပါ။
ဖော်ပြချင်တဲ့ subject ပဲ focus မိပြီး background blur လိုချင်ရင်တော့
f/1.8, f/2.8, f/3.5, f/4.0, f/5.6 သင့်တော်တာ သုံးနိုင်ပါတယ်။
shutter speed ကိစ္စပါ ..tripod မသုံးရင် 1/80s အောက်ကို ချ မရိုက်သင့်ပါဘူး
မြန်ရပါမယ်။ still အတွက် 1/120s နဲ့ အထက် ဟာ သင့်တော်မှု ရှိတယ် ဆိုနိုင်ပါတယ်
fast moving objects ဖြစ်တဲ့ ဖြတ်သွားတဲ့ ကား လို အရာမျိုးအတွက်တော့
ပြတ်သားချင်တယ် ဆိုရင် သည့်ထက်ပိုတဲ့ shutter speed လိုပါတယ်။
အရာဝတ္ထုဟာ ဘယ်လောက် မြန်နေသလဲ ဆိုတာ မူတည်ပြီးတော့ပေါ့..
ကိုဂီ အဲသာဆိုရင် 1/160s နဲ့ ရိုက်ခဲ့ပါတယ် ဆိုတဲ့ ပုံ(၅)က ဘာလို့ Hand Shade ဖြစ်နေတာလဲ သိချင်ပါတယ် .. နောက်တစ်ခုက (မနေနိုင်လို့ ပြောပါဦးမယ်) ကျွန်တော် နေ့ခင်းကပြောတဲ့ Aperture 27 ဆိုတာပါ ။ သူပြောသလိုပဲ ကျွန်တော် ရိုက်ကြည့်ခဲ့ပါတယ် ။ ISO ကတော့ 80 မရှိလို့ 100 နဲ့ ရိုက်ပါတယ် ၊ Aperture က 27 မရှိလို့ 25 နဲ့ ရိုက်ပါတယ် ၊ Shutter Speed ကတော့ 1/160s နဲ့ပါ ။ နေ့လည် 12.00 ကျော်ကျော် မှာနေပူထဲက Subject ကိုရိုက်တာ မဲမဲ ပဲထွက်လာပါတယ် ။ နံပါတ်(၅) ပိုင်ရှင်က ဘယ်လို ရိုက်လဲဆိုတာကို ကျွန်တော် တစ်ကယ်ပဲ သိချင်ပါတယ် .. ရွာထဲက ပညာ ရှင်များလည်း ကျွန်တော့်ကို နားလည်အောင် ရှင်းပြ ပေးကြပါဦးနော်..
နောက်တခု ဖလက်ရှ် ကျွေး မကျွေး မရေးထားဘူးလေဗျာ
ဖိုးကပ်စ် ကတော့ ပရီ ဖိုးကပ်စ် ထင်ကြောင်းပါ
Halfway down or mirror lockup သုံးကြည့်ပါလားဗျ
ဟဲ .. ဟဲ … ဟဲ …. …….
သူ့ကင်မရာက ၊ Sonny DSC -W550 ပါတဲ့ ။
Sonny DSC -W550 ဆိုရင်ဖြင့် …… FNumber ကို 27 အစား ……….. ——> 2.7 လို့ ပြင်ဖတ်ကြပါကုန်။
အိုက်ဒလို လုပ်ကြပါဂျာ …
ပို့ပေးလိုက်တဲ့စာထဲ 27 ဆိုဒေါ့ ..
ဘက်ဂရောင်းလည်း မ၀ါးဒေါ့ ..
ဖလက်ရှဲ များ ဖိုင်းယား သေးလား တောင် တွေးပီး
အုံးနှောက်တွေ ခြောက်ကုန်တာ …
ကွန်ပက် ကင်မလာ မှာ
play button နှိပ်ပီးfnumber ISO
shutter speed ဖတ်တာလေးကို ..
ကျနော့် မှာ ကွန်ပက် မရှိလို့ဗျာ ..
ဖြစ်နိုင်တာ ထပ်ပြောရရင် .. ISO က 160 ဖြစ်နိုင်ပြီး shutter speed က 80 ဖြစ်နိုင်ပါကြောင်း
ဟုတ်ကဲ့ မှားပို့မိကြောင်းပါ FNumber 2.7 ပါ … ချစ်ရင်ထူး ဇွန်လ (၄) နေ့ကမှားနေကြောင်း ပြောပါသည် ထပ်ကြည့်တော့ “.” ကျန်ခဲ့ပါကြောင်း ……. ကိုMလုလင်ပြောတာအားလုံးမှန်ပါ ကြောင်း ………
etone နဲ့ အကြိုက်တူတယ် .. ကိုယ့်ဆရာမ ဖြစ်နေတာကိုး…. ၂၀ ကိုဘဲ ဗုတ်ခဲ့တာ.. ဆေးလိပ်တိုချေထားတာလေးပါ ပါလိုက်သေး .. :grin:
စီဂျေကြီး အားပေးတာကိုလည်း မှတ်မှတ်ရရပါပဲ။
ကျမလည်း ဒီဓာတ်ပုံရဖို့ အမွှာညီအမနဲ့အတူ ငွေကုန် သံပြာ ဖိနပ်ပြား ဗိုက်ကားအောင် အားထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။
ပထမနေ့မှာ ဈေးသည်ကြီးကို ရိုက်တော့ ပုံကောင်းမရတာနဲ့ စကားရော ဖောရောလုပ်ပြီး ထပ်ရိုက်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် ဈေးသည်ကြီးက ရှက်လွန်းလို့ ခေါင်းတောင် မမော့တော့ တာနဲ့ လက်လျှော့လိုက်ရပါတယ်။
နောက်နှစ်ရက်လောက်နေမှ ပဒုမ္မာက ဈေးသည်ရဲ့ အရှေ့ကနေပြီး သွားဝယ်တယ်။
စကားပြောပြီး မုဒ်ရအောင် ကြိုးစားတယ်။
ပြောင်းဖူးတွေကို အပိုင်းချိုးပြီး အိတ်ထဲ့ထည့်ပြီး လှမ်းပေးတော့မှ ကျမဘက်ကို ပေးလိုက်လို့ ပြောတဲ့အချိန်မှာ ကင်မရာကို ကြိုချိန်ထားပြီး အမိအရ ရိုက်ယူလိုက်ရတာ။
အဲဒီပိုစ့်ကို ဖုံးနဲ့ဖွင့်ပြီး ကျမတို့က ကမ္ဘာပေါ်က ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲမှာ ၀င်ပြထားတာ လို့ ပြောပြီး သူ့ပုံကိုပြတာ ရဲရဲတောင် မကြည့်ပဲ ရှက်နေလိုက်တာများ ထပ်တောင် ရိုက်ပြချင်စိတ်ပေါ်လာတယ်။
ဈေးသည်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ လိုက်ရိုက်ထားတာ ပုံတွေ အများကြီးပဲ။
အဲဒီပုံတွေထဲကမှ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံ ၅ ပုံလောက် လုင်ဆီပို့ပြီး ရွေးခိုင်းတာပါ။
အနီးကပ်ကြီးကြပ်မှုပေးတဲ့ ဆရာလုလင်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အရင်ကတည်းက ၀ါသနာပါတာမို့ အခုတော့လည်း ပိုးဝင်သွားပြီမို့ နောက်လခေါင်းစဉ်အတွက် တွေ့သမျှကလေးတွေကို ဓာတ်ပုံလိုက်ရိုက်နေပါကြောင်းးးးးးးးး
သည်လ အတွက် ပုံကို အလွန် သဘောကျ နှစ်ခြိုက်မိတာ လေး ပြောပါရစေဗျ
ရိုက်ကူးဆက်တင်လေးတွေကိုလည်း ကိုံလင် ကိုမေးပြီးထည့်ပေးစေလိုပါကြောင်း
ဒီကနေ့ရုံးဖွင့်တော့ ရွာထဲဝင်ကြည့်လိုက်မိတယ် အရမ်းကိုအံ့သြ၀မ်းသာသွားမိတယ် ပြပွဲ စတင်ချိန်ကဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ နံပါတ် ၄ နဲ့ နံပါတ် ၈ အဲဒီပုံလေးတွေရဲ့လက်ရာက တစ်ခြား သူတွေနဲ့မတူပဲ ထူးခြားမှုတစ်ခုခုရှိနေခဲ့ပါတယ် ဓါတ်ပုံအကြောင်းကိုလုံးဝနားမလည်ပါဘူး ဒါပေမယ့် ဒီလက်ရာတွေက ထူးခြားမှုတစ်ခုခုကိုပေးနေတယ်လို့စိတ်ထဲခံစားမိပါတယ် …… မထင်မှတ်ပဲ အဲဒီပုံတွေကြားမှာ ကျွန်မရဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ ပုံနံပါတ် (၅) က ဗုတ်သူအများဆုံးရ သွားခဲ့တာ ၀မ်းလည်းသာတယ် ရှက်လည်းရှိမိတယ် ….. ကျွန်မကို ဗုတ်ပေးတဲ့သူတွေကိုလည်း အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ဝမ်းသာမိပါတယ် ……… အခုပြပွဲလေးက တစ်ကယ့်ကို မှန်မှန်ကန်ကန်ပြု လုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲလေးဆိုတာ ကျွန်မယုံကြည်ခဲ့မိပါတယ် ကျွန်မဓာတ်ပုံပြပွဲဝင်တာ မည်သူကိုမျှလည်း မပြောခဲ့ပါဘူး မည်သူမျှလည်းမသိခဲ့ဘူး ကျွန်မကပထမဆုံး ပြပွဲမို့လို့ဝင်ပြချင်စိတ်လေးရိုးရိုးနဲ့ပြမိတာပါ တစ်ကယ်တန်းကျွန်မပြဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာ June လ မှာလုပ်မယ့် “ချစ်စရာ့အရွယ်” မှာဖြစ်ပါတယ် ……
ဒီပုံလေးရိုက်စဉ်တုံးက မန်းဂေဇက်မှာပို့စ်တင်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ရိုက်ခဲ့တာပါ ရန်ကုန်တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်မှာရိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်မပုံတွေတင်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် ကွန်မကောင်းတာကြောင့်မတင်ဖြစ်ခဲ့ပဲ Draft ထဲမှာပဲ ရှိနေခဲ့ပါတယ် ပြပွဲလုပ်မယ့်အချိန်မှာ ဒီပုံလေးက ကလေးတွေနဲ့ဈေးသည်ဦးလေးကြီးအတော် ရင်းနှီးနေပုံဖြစ်နေလို့ ကျွန်မပြပွဲအတွက် ပြဖို့စိတ်ကူးမိပြီး ပို့ခဲ့တာပါ အဲဒီဈေးသည်ကြီးက ဆင်တွေကပြတဲ့ရှေ့မှာရောင်းပါတယ် မနေ့က (တနင်္ဂနွေ ၃.၆.၂၀၁၂) မှာသူနဲ့တွေ့တော့ ကျွန်မထပ်ပြောခဲ့သေးပါတယ် အင်တာနက်ပေါ်မှာ အစ်ကို့ပုံကိုတင်ပြီးပြပွဲမှာ ပြထားတဲ့ အကြောင်းလေးကိုပါ …… အဲဒီဈေးသည်ကြီးကအလွန်သဘောကောင်းပါတယ် ကျွန်မသမီးလေးနဲ့အခြားကလေးတွေကသူ့အနားမှာ ၀ိုင်းနေတာသူက အားလုံးသေချာရှင်းပြပြီး စိတ်ရှည်လက်ရှည်လုပ်ပေးနေပါတယ် အရုပ်လေးတွေကို ဈေးလျော့ပေးတဲ့အပြင် ကျွန်မတို့အပြန်မှာ လက်ဆောင်အဖြစ် အရုပ်တစ်ရုပ်ပေးလိုက်သေးပါတယ် …. ဒီလိုသဘောကောင်းတဲ့အရုပ်ဈေးသည်ကြီးကို ကျွန်မပြပွဲဝင်ပြဖို့ စိတ်ကူးလေးဖြစ်ခဲ့တာပါ သမီးလေးပုံက ခေါင်းငုံနေပါတယ် သမီးလေးမျက်နှာမြင်ရတဲ့ပုံတွေဆိုရင် တစ်ခြားရွာသူ ရွာသားတွေ မြင်ရင်သိမှာစိုးလို့ မမြင်ရတဲ့ပုံလေးကိုရွေးတင်လိုက်တာပါ ………
စာဖတ်သူများလည်း ၀င်ရောက်ပြတာသိရတော့ အရမ်းကိုဝမ်းသာမိပါတယ် ….. ကျွန်မကော့်မန့်ပေးတာတွေမှာ အမှားအယွင်းများပါခဲ့ရင် အားလုံးခွင့်လွှတ်ပါလို့ တောင်းပန်ချင်ပါတယ် ….
ကျွန်မက လေးမှော်နဲ့ ကိုလုလင်ရိုက်တဲ့ပုံတွေကို လက်ရာကောင်းမှန်းခံစားမိပါတယ် ……
ကျွန်မသဘောကျတာ ၁၂၊ ၂၀ နှင့် ၂၃ပုံတွေကိုပါ ….. အခုပွဲလေးရဲ့အဓိက ရလဒ်အဖြေက ဓာတ်ပုံပိုးရှိ တဲ့ကိုကိုမမတွေ ဓာတ်ပုံပညာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အတော်ဗဟုသုတရမယ့်ပွဲလေးတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ် …..
ဟိုဘက် ဒါ့ပုံပြိုင်ပွဲ ပိုစ့် ကို ပရင့်ထုတ်ပြီး
အဲ့လူကြီး ကို အမှတ်တရလက်ဆောင် သွားပေးရမှာဗျ ….
မော်ဒယ် ရီလိစ်(ကာယကံရှင် ခွင့်ပြုချက်) ယူလာခဲ့တဲ့အတွက်
ထပ်လောင်း ချီးကျူးပါတယ်ဗျာ …
၁၈မမ နဲ့ ရိုက်ရင် အပြည့်ပါနေမစိုးလို့ ၃၈မမ နဲ့ ဟိုလူမသိ ဒီလူမသိအောင်
ညည်းပြောတဲ့ မျှမျှ တတ မှန်မှန် ကန်ကန် ဖြစ်အောင် ..
ကျုပ် ၀င်လည်း မပြိုင်ခဲ့ ဘယ်သူဘယ်ပုံ ဆိုတာလဲ မပြောခဲ့တာပေါ့..
(သူငယ်ချင်းတွေထဲက မေးတာ မြန်းတာ ရှိပေမယ့် အားနာပေမယ့် မဖြေခဲ့ပါဘူး..)
ဆက်တင်တွေ အကြောင်း မေးတုန်းကမေးထားပြီး နောက်မှ တင်တယ်ဆိုတာကလည်း
အဲ့သည့် ဂဏန်းတွေ ဖတ်ပြီး ပုံ၁ပုံကို သင်္ချာဆန်ဆန် ချဉ်းကပ်မှာ စိုးလို့ပါပဲ …
ပွင့်၂လင်းလင်း ပြောရရင် ..ဓါတ်ပုံပညာအရ .. ခင်ဗျားပုံကို ကျုပ် မကြိုက်ဘူးဗျ. ..
လူအများစုရဲ့ အသည်းအညှာ ကို ဆွဲခါနိုင်ခဲ့တဲ့ ပုံ ဖြစ်ကြောင်းကိုတော့
လက်ခုတ် တီး အားပေးသွားပါတယ်ဗျ..
ကျွန်မပုံကို ဓာတ်ပုံဆရာတွေက တန်းမ၀င်ဘူးလို့ပြောကြပါတယ် ……. မှန်ပါတယ် …… ကျွန်မကလည်း ကင်မလာပိုင်းဆိုင်ရာ အယူအဆကောင်းစွာရိုက်ထားတာမဟုတ်ဘဲ သဘာဝပုံလေးတွေကို ရွာထဲ မှာပို့စ်တင်ပြချင်တာနဲ့ရိုက်ထားတာပါ …….. ကြည့်ယုံသက်သက်ဆိုမမှားပါဘူး ….. ပိုကောင်းတဲ့ ပုံတွေရိုက်ဖို့ သင်ယူဦးမယ်ကိုဂီရေ …….. ဒါပေသည့် ကျွန်မက ပစ္စည်းကောင်းတွေဝယ်ရမှာ တော့နှမြောတယ်ရှင့် ……. အဲဒီဘက်ကို ၀ါသနာသိပ်မရင့်သေးဘူးရှင့် အိမ်မှုကိစ္စဘက်ကိုပဲ ဦးတည်နေရလို့ပါ …….
စကားအတင်းစပ် ကိုဂီနောက်နှစ် ၀ဲဒီကို တက်ချင်တယ်နော် မဖိတ်ရင်စိတ်ဇိုးမှာ ………
ဈေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေ ၀ယ်ဖို့ မပြောပါဘူး..
လက်ထဲက ကင်မလာ ကိုဘဲ ..
စေလိုရာ စေ အစွမ်းကုန်
နောက်တခေါက်လည်း ..ကျုပ် ဘယ်သူ့မှ ဗုတ်မည် မဟုတ်ပါ..။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ..ကျုပ်ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းတဲ့
ချစ်စရာ့အရွယ်ဆိုတာ ..၁၆နှစ်ကမှ စပြီး မိန်းကလေး သီးသန့် ဖြစ်ပါတယ်…
၂၃ ပုံလေးလည်း သဘောကျတယ်။ အတော်များများကို သဘောကျမိတယ်။ ဒါနဲ့ ချစ်စရာ့အရွယ်က ဘယ်အရွယ်ကိုပြောတာလဲ မိန်းကလေးပဲလား ဘယ်သူမဆိုမရဘူးလား… ဒါလေးလည်းပြောပြပါဦး
ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲ ဥက္ကဋ္ဌဂျီးများ ဘာမသိကြီးများဂို တင်ပြ အကြံပေးဆရာလုပ်အပ်ဘာဒယ်
ပြီးခဲ့တဲ့ ဈေးရောင်းစားသူများ ပြိုင်ပွဲမှာ ဘယ်လိုပုံကို ဘယ်လိုအနေထားနှင့် အဆင့်သတ်မှတ်မယ်
ဆိုဒါဂို သေသေချာချာ မပြောဆိုထားဒဲ့အတွက် ကိုယ်သန်ရာ သန်ရာ
ယခုတဖန် ချစ်စရာ့အရွယ် ဆိုတာကိုတော့ သတ်မှတ်ချက်များ ထားသင့်ဘာဒယ်
( 1 ) ချစ်စရာ့အရွယ်ဆိုတာ ဘယ်အရွယ်ကိုခေါ်သလဲ ( ရွာထဲမှာလည်း ချစ်စ/ဆရာ ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်
ရှိတဲ့အတွက် အဲ့သည်အရွယ်ကြီးလား )
(2) ဥက္ကဋ္ဌဂျီးများ ဘာမသိကြီးများ ချစ်စရာလို့ထင်တဲ့အရွယ်ကို ချစ်စရာလို့သတ်မှတ်ရမှာလား
(3) ပုံ များကို ဘယ်လို ဝိသေသတွေပေါ် မူတည်ပြီး အဆင့်သတ်မှတ်မလဲ
ဆိုဒါလေးအား ဥက္ကဋ္ဌဂျီးများ ဘာမသိကြီးများမှ အသိပေးကြေငြာပေးပါရန်
ရိုသေလေးစားဦးညွှတ်ဖင်ကုန်းပြီး တောင်းပန်လျှောက်ထား အကြံပေးဆရာလုပ်အပ်ဘာသည်
ဥက္ကဋ္ဌဂျီးများ ဘာမသိကြီးများ ခင်ဗျား
( 1 ) Childhood ( p-5 )
(2) Sweet Smile ( p-20 )
(3) Pretty Girl ( p-4 )
အင်တာနက်ပျက်နေတာနဲ့ ဒီနေ့မှ ၀င်ကြည့်ဖြစ်တယ် …
နံပါတ် (၂၀) ကို ဗုတ်ခဲ့တာ အန်တီ မမ ပုံဖြစ်နေတာသိရလို့ အံ့သြသွားတယ် …
ကျွန်မကတော့ ဘုရားစောင်းတန်းမှာ လျှပ်တစ်ပြတ်တွေ့လိုက်ရတဲ့ ဈေးသည်မလေးကို အမြန်ရိုက်လိုက်ရတာမို့ ဘာမှ ချိန်ဖို့ အချိန်မရခဲ့လိုက်ဘူး … ပြပွဲမို့လို့ အားပေးတဲ့အနေသာ ၀င်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် …
ချစ်စရာ့အရွယ်အတွက် မြင်သမျှကလေးတွေကို လိုက်ချိန်နေပါသော်လည်း အခုထိ တစ်ပုံမှ မရိုက်ရသေးဘူး …
ပုံတင်ပြီးကတည်းက ငါ့ပုံလေး ဘယ်သူများ ဘယ်လို ပြောပါလိမ့်မလဲဆိုပြီး မကြာခဏ ဖွင့်ကြည့်ရတာ အမောပဲ။
ပထမဦးဆုံး ဝေေ၀ ဗုတ်လိုက်တယ်လို့ ရေးတာလည်း တွေ့ရော ၀မ်းသာအားရ ဘေးနားက ရှိတဲ့လူ အကုန်လုံးကို လိုက်ကြွားတော့တာပဲ။
အခုလို တစ်ပုံချင်း သုံးသပ် ပြပေးတာ ကျေးဇူးအထူးပါ ညီလေးရေ။
ဒါမှလည်း နောက်တစ်ခါ ရိုက်ရင် ဘယ်လို အနေအထားဘာညာ ရွေးတတ်လာမှာပေါ့။
ပုဂံမှာ ပန်းချီကို LIVE ရေးပြီး တစ်ပုံ ၃၀၀၀ နဲ့ ရောင်းနေတာဗျ။
ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုမစိုက်ပဲ သူဆွဲနေတဲ့ ပန်းချီတစ်ခုထဲမှာပဲ အာရုံစိုက်ပြီး
လုပ်နေတာကိုက သူ့ရဲ့ MARKETING ဗျ။
နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ ဒီထက် ပိုကောင်းအောင် ရိုက်နိုင်မှာပါ ဂီဂီရေ။
တစ်ပုံချင်း လေးလေးစားစား သုံးသပ်ပြပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ။
သိချင်တာလေးပြောပြပေးပါ တစ်ယောက်ကို ဘယ်နှစ်ပုံပို့နိုင်ပါသလဲ၊ ဘယ်ကိုပို့ရမလဲ၊ ဘယ်နေ့နောက်ဆုံးလဲ ဆိုတာလေးပါ
http://myanmargazette.net/127841/travel/photography-pictures-galleries-wallpapers-photo-tips ကျွန်တော် တင်လိုက်ပါပြီခင်ဗျ ..
ရက်စက်လို့ ရက်စက်တယ် ပြောတာပေါ့ဗျာ..
တိမ် ပြည့်သွားရင် ဘိုလုပ်မဲ …
ပုံတွေမမြင်ရဘူး၊ ဘယ်မှာကြည့်ရမှာလဲ၊ ဒီိပိုစ့်မှာမဟုတ်ဘူးလား